Imisebenzi ye-Amazon.com, Inc. namuhla, intengo ye-AMZN esitokisini manje, yabelana ngamanani we-Amazon.com, Inc..
AMZN = 2 890.30 US dollar
ukuguqulwa kwamanani emasheya kusukela izolo
Imininingwane ngokuguqulwa kwe Amazon.com, Inc. in US dollar ibuyekezwa kanye ngosuku. Ibonisa inani lokugcina lesitoko Amazon.com, Inc. in US dollar. Imininingwane yesilinganiso sesilinganiso sesilinganiso esibuyekeziwe. 1 isitokhwe se Amazon.com, Inc. ikhuphuke 11.6 US dollar. Amazon.com, Inc. iyakhuphuka. The Amazon.com, Inc. lenyuke uma liqhathaniswa US dollar ngo 40 amakhulu ngamakhulu wephoyinti.
Amazon.com, Inc. inani lesabelo senkampani ku US dollar
Esontweni eledlule, Amazon.com, Inc. ingathengiswa nge- 2 675.01 US dollar yase-Ukraine. Ezinyangeni ezintathu ezedlule, Amazon.com, Inc. ingathengiswa ngo- 1 997.59 US dollar yase-Ukraine. Ezinyangeni eziyisithupha ezedlule, Amazon.com, Inc. ingathengiswa ngo- 1 874.97 US dollar yase-Ukraine. Intengo yesitoko ye Amazon.com, Inc. in US dollar ingabonakala eshadini. Ushintsho lwentengo yesitoko Amazon.com, Inc. in US dollar ngeviki 8.05%. 44.44% ngonyaka - ushintsho entengo yesitoko ye Amazon.com, Inc..
Izingcaphuno ze-Stock Amazon.com, Inc. US dollar
AMZN Ukuze US dollar (USD)
1 AMZN 2 890.30 US dollar
5 AMZN 14 451.50 US dollar
10 AMZN 28 903 US dollar
25 AMZN 72 257.50 US dollar
50 AMZN 144 515 US dollar
100 AMZN 289 030 US dollar
250 AMZN 722 575 US dollar
500 AMZN 1 445 150 US dollar
Uma une 28 903 US dollar, bese ungena the British Virgin Islands ungathenga 10 stock of Amazon.com, Inc.. Namuhla, 25 stock of Amazon.com, Inc. ithengwa 72 257.50 US dollar. Isiguquli sesilinganiso sesitoko manje se 50 stock of Amazon.com, Inc. iyanikeza 144 515 US dollar. Ukuguqula 100 stock of Amazon.com, Inc., 289 030 US dollar ziyadingeka. Ungashintshana 722 575 US dollar ye 250 stock of Amazon.com, Inc.. Namuhla 500 stock of AMZN = 1 445 150 USD.
AMZN umlando wesilinganiso samasheya
Amazon.com, Inc. in US dollar 2 July 2020 - 2 890.300 US dollar. 1 July 2020, 1 stock of Amazon.com, Inc. = 2 878.700 US dollar. Amazon.com, Inc. in US dollar 26 June 2020 ilingana no 2 692.870 US dollar. Okuphezulu AMZN / USD intengo yamasheya ngaphakathi yayivuliwe 02/07/2020. 19 June 2020, 1 stock of Amazon.com, Inc. izindleko 2 675.010 US dollar.
Isabelo esisodwa se-Amazon.com, Inc. namuhla sise-2 890.30 $. Intengo yezabelo ze-AMZN ishintshele ku-+0.4% noma ku-+11.6 USD kusukela ngosuku lokugcina lokuhweba. Ungathenga amasheya angu-100 we-Amazon.com, Inc. ngo-289 030 US dollar noma uthengise amasheya angu-50 we-AMZN ngo-144 515 US dollar.
Ama-Amazon.com Inc ungumthengisi we-intanethi.I-Company ithengisa imikhiqizo yayo ngokusebenzisa iwebhusayithi ehlinzeka ngezinsizakalo, njengezinsizakalo zokukhangisa kanye nezivumelwano zekhadi lesikweletu se-credit card.Ibuye inikeze amadivaysi e-elektroniki afana ne-Kindle e-readers namaPhilisi omlilo.